Bayer Munich iyo Barceloan keebaa shabaqa suuqa kala iibsiga ku dhici doona ?
Monday, May 20th, 2019 - 14:34:52
Monday July 09, 2018 - 20:47:28 in Wararka by Hussein Hadafow
Sida lagu qoray majaladaDon Balon, kooxda ka dhisan horyaalka dalka Germany ee Bayern Munich ayaa baadi goob ugu jirta xidiga qadka dhexe ee kooxda Barcelona Ivan Rakitic kaas oo dhawaan xulkiisa ku hogaamiyey seme finalka koobka dunida.
Tababaraha koxda Bayern Munich Niko Kovač ayaa maamulka kooxdiisa ka dalbaday ineey lasoo wareegaan Ivan Rakitic oo uu u arko xidig wax badan kusoo kordhin kara kooxda ku ciyaarta garoonka Allianz Arena.
Bayern ayaa hada dooneysaineey Ivan Rakitic kula soo wareegto aduun dhan €80M isla markaana ay ka saxiixato qandaraas 4 sano ah oo uu sanadkiiba ku qadanyo mushaar dhan €9M.
Ivan Rakitic oo 30 jira ayaa hada kamida xidigaha muhiimka ah ee kooxda Barca lamana oga ineey kooxdiisu si sahlan ku fasixi doonto maadaama uu kula jiro qanadaars dheer oo dhamaan doona sanadka 2021.
Barcelona ayaa dhankeeda u hanqal-taageysa xiddiga qadka dhexe ee bayer Thiago Alcantara kaasoo ay u aragto badalkaIniesta.